Dambidoolloo: Ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooDambidoolloo: Ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu
KOMINIKEESHINII BULCHIINSA MAGAALAA DAMBIDOOLLOO
(BBC Afaan Oromoo) — Guyyaa Kibxataa Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti dargaggoon maqaan isaa Amaanu’eel Wandimmuu jedhamu humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraataan BBCn dubbise ibseera.
Aanga’oonni godinichaa dargaggoon kun humnoota mootummaan ajjeefamuu isaa mirkaneessanii, miseensa garee ‘Abbaa Torbee’ jedhamu waan ta’eef tarkaanfiin irratti fudhatame jedhan.
Kominikeeshiniin Bulchiinsa Magaalaa Dambidoolloo ammoo maqaa ‘Abbaa Torbee’ jedhamuun lubbuu namaa kan baasaa ture irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun fuula Feesbuukii isaarratti suura dargaggoo kanaa kan morma irratti shuguxiin rarraafame maxxanseera.
Akka Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalichaatti gareen ‘Abbaa Torbee’ ofiin jechuun lubbuu namoota nagaa baasaa turan guyyaa kaleessaa ganama nama Obbo Gammachuu Mangashaa jedhamu rukutee osoo miliqaa jiruu qindoomina humna nageenyaa magaalattiitiin miilla rukutamee qabame.
Suuraaleen miidiyaa hawaasaarratti qoodaman ammoo dargaggoon kun addabaabayii magaalichaarratti, bakka namoonni hedduun arganitti shugguxiin uffata isaatti maxxanee, harki isaa ammoo duubatti hidhamee mul’ata.
Yaada jiraataa Dambidoolloo
Jiraataa magaalaa Dambidoolloo ganda 05 akka ta’e kan himeefi soda nageenyaaf maqaan isaa ammatti kan hin eeramne, dargaggoo Amanu’eel yeroo humna mootummaatiin ajjeefamu akka arge hima.
“Nama Amaanu’eel jedhamu uummanni baayyee jaallatu osoo … ummata faana deemaa jiruu waraanni mootummaa ari’ee itti dhukaasee yeroo ajjeesuu argine” jechuun ibsa jiraataan kun.
Yeroo isaan ummata keessaa ari’anii ajjeesan suuqiitii waa bitachaa akka ture kan dubbatu jiraataan ganda 05 kun, kan qondaaltonni mootummaa nama rukutee osoo fiiguu rukkutamee qabame jedhu akka hin argine hima.
Haata’u malee, dargaggoon ajjeefame hiriyyaa isaa akka ta’eefi nama nagaa akka ta’e ibsa.
‘Abbaa Torbee hanga Garee Sonsaa ajjeechaa qondaalota mootummaa duuba’
‘Mirga Ajjeesuu’- Namoota abbaasaa gara jabinaan ajjeesaniif ilma dhiifama godheen kitaaba barraa’e
Guyyaama kaleessaa namni biraan maqaan isaa Balaay jedhamu rasaasa lamaan rukkutamee wallaansaaf rifeerii ergamee jiraachuus quba qabaachuu dubbata jiraataan kun.
Namni biroon Gammachuu jedhamus rukutamuu akka dhaga’e kan dubbatu jiraataan magaalaa Dambidoolloo kun, boodarra dhukaasni yeroo baayyatu baqatanii akka mana namaa dhokatan hima.
Akka jiraataa BBCn dubbise kun jedhutti, dargaggoo ajjeefame kanaan alatti kanneen madaa’an lamaanuu humnuma mootummaatu rukkute.
”Namni addabaabaayiitti baafamee ajjeefame hin jiru”
Itti-gaafatamaa nageenyaa godina Qeellama Wallaggaa Obbo Tasammaa Waariyoo garuu BBCtti akka himanitti, gareen ‘Abbaa Torbee’ jedhamu irra deddeebiin namoota ajjeesuun maqaan isaa ka’u kun namoota lama rukkutee osoo baqachaa jiruu qaama nageenyaan rukkutamuu dubbatu.
Qajeelcha poolisii godinichaarraa namni BBCn dubbises waanuma walfakkaataa himu.
Akka qondaaltonni mootummaa jedhanitti namoota guyyaa kaleessaa meensa garee ‘Abbaa Torbee’ jedhameen namoota rukkutaman keessaa tokko abbaa qabeenyaa kan ta’an Obbo Gammachuu Mangashaati.
Bakki haleellaan itti raawwatames mana barumsaa Qeellam sadarkaa lamaffaatti jedhameera.
Obbo Tasammaa Waariyoo BBCtti akka himanitti namni addabaabaayiitti baafamee ajjeefame hin jiru.
Guyyaa kaleessaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ‘ABO Shanee’ fi qaama mootummaa gidduu lolli akka ture ibsuun, namni rukkutamee du’e kun shuguxii ittiin nama nagaattiifi qaama nageenyaatti ittin dhukaaseefi dheengaddumas nama ittiin ajjeese harkatti qabameera jedhu Obbo Tasammaan.
Akka qondaalli mootummaa kun jedhanitti. dargaggoon ajjeefjlame kun bosona kan tureefi loltuu ‘ABO Shaneeti.
Shugguxii tokko qabatee dhufee magaalaa keessatti nama nagaa irratti dhukaasa yeroo banutti qaamni keenya to’achuuf yaalus isaanittis dhukaasee yeroo inni banu tarkaanfii irratti fudhatanii akka shuguxicha harkaa fuudhan ibsuun, dargaggoon kun shakkamaa miti jechuun dubbatu Obbo Tasammaan.
Obbo Tasammaan dargaggoon kun fayyaadhuma qabamee booda gara addabaabaayii geeffamuun ajjeefame kan jedhu soba ta’uu himuun, erga rukkutamee madaa’ee booda addabaabaayiirratti mullatee lubbuun darbuu ibsan.
Haata’u malee ibsi gabaabaan fuula feesbuukii Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Dambii Doolloorratti guyyaa kaleessaa bahe ”guyyaa har’aa ganama nama obbo Gammachuu Mangashaa jedhamu rukutee osoo miliqaa jiruu ciminaa fi qindoomina caasaa nageenyaa magaalattiin milishaa magaalaa keenyaan miilla rukutamee qabamee jira” jedha.
Akka Kominikeeshiniin Bulchiinsa Magaalaa Dambidoolloo jedhutti Dilbata darbe gaazexeessaa OBN Obbo Sisaay Fidaa kan ajjeese garee ‘Abbaa Torbee’ jedhamu kanadha.
Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti shakkamaan to’annoo qaama nageenyaa jala oole murtee seeraa mana murtiin alatti haala akkasiin ajjeefamuun isaa barbaachisummaa manneen murtii gaaffii keessa galcha jechuun ajjeechaa kana balaaleffataniiru.
Komishiniin Mirgoota namoomaa Itoophiyaa adeemsa seera kabachiisuu naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee ibsa torbe darbe keessa baaseen ”sirni seera kabachiisuu haala seeraa hordofeen” akka gaggeeffamu gaafatee ture.
Gazexeessaafi qindeessaa Oromiyaa Biroodkasting Neetwoork (OBN) damee Godina Qeellam Wallaggaa, Sisaay Fidaa Dilbata galgala balbala mana jireenyaa isaa irratti rasaasaan ajjeefamuun himame.
Kantiibaan magaala Dambidoolloo Obbo Tolasaa Kumsaa BBC’tti akka himanitti, ajjeechaan kun qaamolee hidhataniifi Abbaa Torbee jedhamaniin raawwatame jedhan.
Haaluma walfakkaatunis dhaabbanni OBN qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti anaa daarekteera nageenya naannoo mirkanneessa Inispekteer Ahmad Yasiin waabefachuun ajjeechaa gaazexeessaa kanaa mirkaneesseera.
Obbo Tolasaan, ajjeechaaa isaan walqabatee hanga ammaa namni to’atame jiraachuu baatus hordoffiin taasifamaa jiraachuu eeran.
Magaalaa Dambidoollootti haleellaan namoota dhuunfaa irratti qiyyaafate qaama Abbaa Torbee jedhamuun karaa dhokataa ta’een lubbuu namootaa galaafachaa akka jirus himan.
Gaazexeessaa Sisaay Fidaa haleellaan kun irratti raawwatamuun dura dhimma hawaasummaa irraa hirmaatee gara mana isaatti galaa akka tures himan.
Miiltoo hojii gaazexeessaa Sisaayiifi maqaansaa akka hineeramne kan gaafate, godinichatti hojii miidiyaa hojjechuuf yaaddoon nageenyaa cimaan namoota miidiyaa irra akka jiru BBC’tti himeera.
“Nuti hojiidhuma keenya hojjechuu malee quba hin qabnu ture. Garuu doorsisniifi akeekkachiisni yeroo adda addaatti namoota miidiyaatti kennama.
Qaama hin beekamneen karaa bilbilaafi miidiyaa hawaasummaa akeekkachisni namatti kennama,” jedha waahilli hojiisaa kun.
Akeekkachisnii fi haleellaan namootarra gahu eenyuun akka ta’e waan hin beekamneef jecha isa dabalatee ammayyuu yaaddoon nageenyaa akka qabans himeera.
Gaazexeessaa Sisaay Fidaa ogummaa gaazexeessummaatiin waggoota dheeraaf OBN keessa hojjechaa kan ture yoo ta’u, abbaa ijoollee afuriitis.
Magaalaa Dambidoollootti ajjeechaan namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffate yeroo yeroodhaan kan raawwatamu yoo ta’u, yeroo hedduu ajjeechaa kanneeniif qaamolee nageenya mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti itti gaafatamummaa kan fudhatu hin mul’atu.